:Bọchị: Jenụwarị 11, 2020
ETgbọ ala IETT, Metrobus, Ọwara na tram bu ndị njem na-ebupute ndị China na 2019. Ugbo ala 6 274 ​​mere njem 18 nde 498 puku njem, ọnwa ga-aga ugboro 629 ịga [More ...]
International Transport and Logistics Service Productionrs Association UTİKAD zutere ndị otu nta akụkọ na Tọzdee, Jenụwarị 9. Emre Eldener, onye isi oche ndị isi oche UTİKAD na nzukọ ndị nta akụkọ a mere na InterContinental Istanbul Hotel, [More ...]
The ụlọ, nke na-amalite na ngwaahịa na usoro maka eletriki na digital infrastructures French ibu Legrand Group-aga n'ihu na-etinye ego na Turkey. N'agbanyeghị mgbanwe mgbanwe akụ na ụba n'oge na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ Inform ọhụrụ [More ...]
Kardemir bidoro Mmepụta Mpụga Mpụga Ezinaụlọ n'ime ọkọlọtọ nke mba ụwa
Channel Istanbul Herald nke Nsogbu International
Mgbe ọ na-ekwu okwu na Ọdụ Nkwado Ọwa Istanbul, Ọkaiwu na onye nnọchi anya Ambassador Att. Rıza Türmen na onye ezumike nká Rear Admiral Türker Ertürk kwuru na ọwa a ga-ehiwe ga-ebute nsogbu ndị ọzọ na ọkwa mba ụwa. Ndụmọdụ Iwu Iwu Iwu nke 1 nke obodo Istanbul [More ...]
Bursa Mayor Alinur Aktaş, ọnụ ọgụgụ ndị na-abịaru nso 100 Gürsu'nun n'oge na-adịghị anya ima elu ka ọnụ ọgụgụ na atụmatụ maka Gürsu kwuru na ha na-eme otu a. Onye isi obodo nke Obodo Obodo Alinur Aktaş kwuru, “ [More ...]
Na nnọkọ ehihie nke Ọdụ Istanbulgbọ Mmiri Ọdụ Istanbul, Onye Nchịkọ Ọmụmụ Ihe Ọchịchị nke Mahadum Sabancı, onye otu Mahadum Boğaziçi, mere ngosipụta. Smit Sahin, nkwekọrịta Paris nke Channel Istanbul na-emegide nkwekọrịta ahụ, o kwuru. [More ...]
The Republic of Turkey State Railways (TCDD) biri na-aga ime, ka 07.02.2020/XNUMX/XNUMX ụbọchị ọnụ na chọrọ akwụkwọ TCDD General Directorate of Human Resources Department of oge akara aka na Nkewa Branch ma ọ bụ anyị Regional Office (Haydarpasa-Ankara-Izmir-Sivas-Malatya na Adana Afyon) Human [More ...]
Akwụkwọ a chọrọ n'aka ndị a na-achọ ka ahọpụtagoro n'ọkwá TCDD Taşımacılık A.Ş. AKWOCKWỌ Achọtara 2828) Ahụike Mkpesa Ahụike (Hosplọ Ọgwụ Steeti Ọhụụ) [More ...]
Ọrụ Ndị Ọgbọ njem Russia Russia na-aga n'ihu
Ọrụ anyị na-azụ ahịa, nke nwere akụkọ mgbe ochie na Russia, ebe mmekọrịta anyị erutela na nkewa n'ihi ọtụtụ usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'oge gara aga, alaghachila n'ọnọdụ ha dị elu n'ihi nsonye na mkparịta ụka dị elu. [More ...]
Akpọsara 2016 maka High Speed ​​Train na Bursa ma bụrụ nke 2020 lekwasịrị anya. Agbanyeghị na agbanyụrụ ụgbọ okporo ígwè obodo ahụ nwa oge maka ụfọdụ elegharala anya ndị a na-eme n’oge a na-arụ ya, ụzọ ụgbọ oloko nke Bursa [More ...]
Taa na Akụkọ ihe mere eme: 11 Jenụwarị 1999 M2 Şişhane-Hacıosman Metro
Taa na History 11 January 1871 kwadoro Plovdiv-Burgas akara. 11 January 1999 M2 Ugbo ala na Şişhane - Hacıosman Metro Line emeturu ala.